Mmetụta Ọchịchị Na-emetụta Ọhaneze? | Martech Zone
Mmetụta Ọchịchị Na-emetụta Ọhaneze?
Nke a bụ otu n'ime arụmụka dị ukwuu nke ihe kpatara esemokwu na njikọta. Getting nweta okwu mmekọrịta mmadụ na-emetụta mmetụta njin ọchụchọ gị ozugbo? Ma ọ bụ na-elekọta mmadụ nnukwu barometer nke ọrụ na webụ nke na-ewepụta ihe ndị ọzọ na-emetụta ogo. Google na Facebook abụghị ezigbo ndị enyi n'oge a - Microsoft nwere ike ịnweta ọrụ Facebook, o doro anya na Google nwere nghọta ọ bụla (n'agbanyeghị na ha nwere ike site na ndị ọzọ).
Enweghị m obi abụọ na Google na-amalite ileba anya na ntanetị mmadụ iji nyere aka mee ka usoro algorithms ya dịkwuo elu. Ruo ogologo oge, ọ bụ naanị ihe gbasara backlinks. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ SEO gara na-ewepụta ego na tọn backlinks. Mgbanwe mgbanwe algorithm na nso nso a emeela ka mmetụta nke backlinks na-adịghị mma, m kwenyere na enwere nkwenye siri ike na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Abụghị m naanị onye na-eche otú ahụ, ezie.
Ptọ emeela ule nke ya ma weputa ihe ndi ozo di mkpa… nke kachasi ike nwere ike ịkwụsị ịdọrọ ụkwụ gị ma malite iji Google+ ọtụtụ ihe!
Tags: facebook nwere mmasịgoogle plusamasịgbakwunyere 1sgbakwunye otun'usoroezipụAatụmatụ seotweet
Igodo 4 maka igodo mkpọsa na-aga nke ọma
Jun 19, 2012 na 3:26 AM
Great infographic nke na-enyere Internet ahịa ọrụ iji na-akwalite ha na saịtị ndị a aghụghọ…
Jul 4, 2012 na 6:56 PM
You nwewo ike ịmegharị nsonaazụ nke nnwale a?